lundi, 08 février 2021 07:48
Toliara Volamena 73.5kg : "Samy kôpy fa mody mitapy"
Raha ny horonan-tsary fanaraha-maso ny seranam-piramanidina tao Toliara no jerena dia teo amin'ny 6ora10min teo, ny alakamisy 31 desambra 2020, no tonga tao an-toerana ilay fiaramanidina 5R-ASB nitondra ilay volamena 73.5kg.
Hita tamin'ny sary tao Ivato, fa nisy valizy lehibe mavesatra nahiditra an-tsokosoko tamin'ny 4ora49 maraina, ora tao an-toerana, ny alakamisy 31 desambra 2020, tao anaty fiaramanidina tsy nandalo fisavana.
Teto Toliara kosa, ny zavatra tsikaritra dia nisy ny mpikirakira ny caméra, izay nampiseho fotsiny ny laharan'ny fiaramanidina, dia avy eo nahondrika ny camera tsy ahitana ny zavatra mitranga, ka ny tarmac tsy nisy ny zava-nitranga no tena nalainy sary. Teo hatrany io mpikirakira sary io satria dia mihetsika hatrany ny toerana alainy sary saingy ahondriny hatrany ny camera.
Ireo mpandeha, sy ireo tompon'andraikitry ny seranana, dia samy tsy mitsahatra ny maka sary, ao ny mpiasa maka sary mihafina, dia samy miantso an-telefoanina avy ny mpandeha sy ny mpiasa, ary dia miverina maka sary indray.
Misy ny ratra eto amin'ny firenena, na atao araka ny tokony ho izy ny fitsarana ny raharaha dia hita izay tompon'antoka sy ny andraikitry ny tsirairay tamin'iny faty olona iny, miaraka tamin'ireny lundi noir rehetra ireny, na avalona ho tantara izy iny, dia samy mizaka ny fahavoazana nisy, dia samy mampionon-tena, fa raha 12 taona lasa aty aoriana no lasa fifampiantsiana, sy fampitsikafonana sy hirahira ny lasa hatrany no ataon'ny andaniny sy ankilany dia tsy hiroso mihitsy isika.
Ny Tsangambato dia natao ahatsiarovana ny maty ary anakatonana ny fery, fa tsy natao hanamafisana ny ratra.
Reraka amin'ny ady tsy vita ny Malagasy, izay ianareo roa tonta dia tompon'andarikitra amin'izay nifanandrify anareo avy tamin'ireny ady sy fifandràtrana teto ireny.
Ampy izay 12 taona izay, mila fitoniana ary miroso amin'ny fandrosoana ny Malagasy.
lundi, 08 février 2021 07:22
8 février : Journée mondiale de prière et de réflexion sur la traite des êtres humains.
lundi, 08 février 2021 07:20